Xadhig bilaash ah oo fududna leh Wireframe.cc | Martech Zone
Xadhig bilaash ah oo fududna leh Wireframe.cc
Jimco, Janaayo 4, 2013 Jimco, Janaayo 4, 2013 Douglas Karr
Waxaa laga yaabaa inaan ku bilowno waxa silig-sameynta ay tahay! Xiritaanka siligga waa qaab loogu talagalay naqshadeeyayaasha inay si dhakhso leh ugu muujiyaan qaabka qalfoofka bog. Xargaha waaberi waxay soo bandhigaan walxaha ku yaal bogga iyo xiriirka ka dhexeeya midba midka kale, ma muujiyaan naqshadeynta garaafka suugaaneed ee la isku daray. Haddii aad runtii rabto inaad ka farxiso naqshadeeyahaaga, u diyaari silig dalabkaaga ah!
Dadku waxay adeegsadaan wax walba qalinka iyo waraaqda, illaa Microsoft Word, illaa wada shaqaynta horumarsan ee dalabyada siligga si loo qorsheeyo loona wadaago taleefannadooda silig. Waxaan had iyo jeer fiirineynaa qalab aad u fiican waxayna umuuqataa horumariyahayaga, Stephen Coley, laga helay mid aad u yar oo u xor ah adeegsiga - Wireframe.cc
Wireframe.cc wuxuu leeyahay astaamaha soo socda
Guji oo jiido si aad u sawirto Abuuritaanka walxaha siliggaaga ma sahlanaan karin. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad ku sawirto leydi shiraaca oo aad doorataa nooca stencil-ka ee halkaas lagu dhejin doono. Waxaad ku samayn kartaa taas adoo jiidaya jiirkaaga guud ahaan shiraaca oo aad ka xulaneyso ikhtiyaar menu-ka pop-up-ka. Haddii aad u baahan tahay inaad wax ka beddesho laba jeer oo keliya guji.
Super-ugu yar interface - Halkii laga heli lahaa biraaleyaal iyo astaamo aan tiro lahayn oo aan dhammaanteen ka aqaanno aaladaha kale iyo barnaamijyada kale ee 'Wireframe.cc' waxay bixisaa jawi ka madhan khalkhal. Hadda waxaad diiradda saari kartaa fikradahaaga oo si fudud ayaad u sawiri kartaa ka hor intaanay libdhin.
Si fudud ugu sharax - Haddii aad rabto inaad hubiso in farriintaadu ay marayso waxaad had iyo jeer ka faalloon kartaa siliggaaga. Fasiraadaha waxaa loo abuuray si la mid ah walxaha kale ee ku yaal shiraaca waana la shidi karaa oo la dami karaa.
Palette xadidan - Haddii aad dooneysid in siligyada taleefannadaadu ay noqdaan kuwo hagaagsan oo nadiif ah waa inaad ka dhigtaa mid fudud. Wireframe.cc ayaa kaa caawin karta inaad ku guuleysato taas adoo siinaya palette aad u kooban oo xulashooyin ah. Taasi waxay khuseysaa midabada midabka leh iyo tirada jaangooyada ee aad ka dooran karto. Qaabkan nuxurka fikirkaagu waligiis kuma lumi doono qurxinta aan loo baahnayn iyo qaababka qurxoon. Taabadalkeed waxaad heli doontaa silig leh caddeyn sawir gacmeed.
Talooyin caqli badan - Wireframe.cc wuxuu isku dayayaa inuu qiyaaso waxaad damacsan tahay inaad sawirto. Haddii aad bilowdey inaad sawirato cunsur ballaadhan oo dhuuban waxay u badan tahay inuu noqdo cinwaan halkii uu ka noqon lahaa qaanso wareegsan ama goobaabin.Sidaa darteed, menu-ka soo-baxa waxaa ku jiri doona oo keliya astaamaha walxaha qaabkan u qaabayn kara. Isla sidaas oo kale ayaa loo hagaajiyaa - waxaa laguu soo bandhigaa oo keliya xulashooyinka ku habboon walxaha la siiyay. Taasi waxay ka dhigan tahay astaamo kala duwan oo ku jira bar-tool loogu talagalay in lagu saxo tuduca isla markaana loogu kala duwan yahay leydi fudud.
Shabakadaha Wireframe iyo barnaamijyada moobiilka - Waxaad ka kala dooran kartaa laba sheybaar: daaqad biraawsar iyo taleefanka gacanta. Nooca mobiladu wuxuu ku yimaadaa jihooyin toosan iyo muuqaal ah. Si aad ugu kala bedesho sheybaarada waxaad u isticmaali kartaa astaanta ku taal geeska bidix ee kore ama si fudud u cabbir shiraac adigoo adeegsanaya gacantiisa geeska midig ee hoose.
Si fudud loo wadaago oo wax looga beddelo - Xarig silig kasta oo aad kaydiso wuxuu helayaa URL u gaar ah oo aad calaamadeysan karto ama la wadaagi karto. Waxaad awoodi doontaa inaad dib u bilowdo ka shaqeynta naqshadeyntaada waqti kasta mustaqbalka. Qayb kasta oo ka mid ah siliggaaga siligga waa la tafatiri karaa ama xitaa loo beddeli karaa wax kale (tusaale sanduuq ayaa loo rogi karaa cutub).
Tags: saasdesign webqalabka naqshadeynta websaydhkaWireframeqalabka siligga siliggasiligayntaqalabka siligga
ToutApp: Raadinta iibka, Moodooyinka iyo Falanqaynta
Quraac: Maareynta Warbaahinta Bulshada ee Ganacsiga